मलाई सबै केटा मन पर्छ तर विप्लवको छोरा साह्रै मन पर्छ- ज्योति मगर (भिडियो सहित)
Homeसमाचारमलाई सबै केटा मन पर्छ तर विप्लवको छोरा साह्रै मन पर्छ- ज्योति मगर (भिडियो सहित)
March 29, 2021 admin समाचार 5168
गायिका ज्योति मगर समय–समयमा चर्चा’मा आइरहन्छिन् । स्टेज प्रस्तुति, क’पडा पहिराई, विभिन्न पकृतिका अभिव्यक्तिलगायतका कारण उनी चर्चामा आइरहन्छिन् । उनको नीजि जी’वनबारे जान्ने इच्छा धेरैलाई हुनसक्छ । जान्ने इच्छा हुनुपनि अस्व’भाविक होइन । किनकी ज्योति एक ‘चर्चित’ गायिका हुन् । उनका हजारौं सम’र्थक छन् ।
लोकगा’यिकाको रुपमा चर्चित उनी म्युजिक भिडियो अभिनय तथा स्टेज पर्फमेन्समा बोल्ड अव’तारको कारण पनि चर्चामा हुन्थिन् । त्यसैले त ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’ उनी आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न मात्र शोमा उनी सह’भागी भएको आरोप पनि लाग्यो । उनी भने आफुमा रहेको बहुमुखी प्रतिभा प्रस्तुत गर्न शोमा सह’भागी भएको बताउँछिन् ।
यसैबीच, ज्योतिको विवाह भएको होला नहोला ? उनले यो प्र’श्नको साम’ना कयौं ठाउँमा गरेकी छन् । उत्तर भने स्पष्ट रुपमा दिएको सुनिदैंन । आज भने उनले सबैलाई प्र’ष्टरुपमा यसको जवाफ दिएकी छन् । ज्योतिले आफ्नो विवाह नभएको बता’एकी हुन् । – इताजा खबरबाट
बाँकी हेर्नुस् तलको भिडियोमा-
नेपालमै पहिलोपटक गुल्मीमा भेटियो यस्तो अचम्मको गाई – लगातार ७ बर्ष देखि यस्तो !
चार वर्षमा चार पर्यटन मन्त्री : कसले के के गरे ? चार वर्षमा चार प’र्यटन मन्त्री : कसले के के गरे ?
June 12, 2021 admin समाचार 4689
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व’को सरकारको करिब साढे ३ वर्षको अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा चार जना मन्त्री फेरिए, करिब ६ महिना प्रधानमन्त्री आ’फैंले यो मन्त्रालयको जिम्मा लिए । अस्थिर नेतृत्वको प’रिणाम पर्यटन
March 9, 2021 admin समाचार 5772
माध्यामिक तहको विद्या’लयमा जम्मा १८ जना विद्यार्थी छन् भन्दा अच्च’म लाग्न सक्छ । तर, यो यथार्थ हो लमजुङको एक माध्यामिक तहको विद्यालयको । १८ जना विद्यार्थी पढाउन सुन्दर’बजार नगरपालिका ३ दुराडाँडामा रहेको पाणिनि संस्कृत माविमा
५५ केजिको माछा कालीगण्डकीमा भेटियो,यत्रो ठुलो माछाको रोचक तथ्य यस्तो छ (भिडियो हे’र्नुस)
April 1, 2022 admin समाचार 1151
माछालाई दाउर’लाई जसरी बोकेर बजारमा बेच्न लगेको कहिल्यै देख्नु भएको छ ? माछा नाम्लोले भारी बोकेझै बो’केर एक ब्यक्ति हिँडेको तस्विर भाइरल बनेको छ । यो ५५ केजीको माछा कालिगण्डकीको रिँडीमा समा’तिएको बताइएको छ ।